सरकारी बैंकले नै मानेनन् राष्ट्र बैंकको निर्देशन, २३ स्थानीय तह बैंकविहीन !
स्थानीय तहमा बैंक विस्तारले कुल गार्हस्थ बचतमा २२ प्रतिशत योगदान
काठमाडौं – तोकिएअनुसार स्थानीय तहमा नगएर सरकारी बैंकहरूले नै स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरिरहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय तहको नामै किटान गरी शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत उपेक्षा गर्दै सरकारी बैंकहरूले नै तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा विस्तार नगरेका हुन् ।
यसरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा विस्तार नगर्ने सरकारी बैंकहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २३ वटा स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये ९ वटा स्थानीय तहमा सरकारी बैंकले आ–आफ्नो शाखा विस्तार गरेका छैनन् ।
चार स्थानीय तहमा पुगेन कृषि विकास बैंक
कृषि विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार गरेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंकले जाजरकोटका कुसे गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कालीकोटको महावै गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंकले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार गरेको छैन ।
यी गाउँपालिकामा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तीन स्थानीय तहमा पुगेन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएअनुसार आफ्ना शाखा विस्तार गरेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिका र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो शाखा स्थापना गरेको छैन ।
दुई गाउँपालिकामा पुगेन नेपाल बैंक लिमिटेड
देशकै पुरानो नेपाल बैंक लिमिटेडले २ वटा गाउँपालिका आफ्ना शाखा विस्तार गरेको छैन । नेपाल बैंक लिमिटेडले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार डोल्पाको काइके गाउँपालिका र मनाङको नार्फु गाउँपालिकामा आफ्नो शाखा विस्तार नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंकिङ सेवा नपुग्नेमा अधिकांश दुर्गम जिल्ला
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकिङ सेवा नपुग्ने स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांश स्थानीय तह दुर्गम जिल्लाका रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बझाङ, बाजुरा, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाका गाउँपालिकाहरू अझै बैंकिङ सेवाको पहुँच बाहिर रहेका छन् । बैंकिङ पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरू बाजुराको पाण्डवगुफा गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र गौमुल गाउँपालिका रहेका छन् । तीमध्ये पाण्डव गुफा र स्वामिकार्तिक गाउँपालिकामा हिमालयन बैंक तथा गौमुल गाउँपालिकामा कुमारी बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गरेका छैनन् । त्यस्तै बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका पनि बैंकको शाखा नपुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै बझाङका काँडा गाउँपालिका र थलरा गाउँपालिकामा पनि तोकिएअनुसार बैंकका शाखा स्थपाना भएका छैनन् । ती दुईटै गाउँपालिकामा क्रमशः एभरेष्ट बैंक र कुमारी बैंकलाई आफ्नो शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका र डोल्पाको शे– फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा प्रभु बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएपनि अझै शाखा विस्तार भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा सेन्चुरी बैंक, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकामा बैंक अफ काठमाडौंले र गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गरेका छैनन् ।
पर्साको जीरावनी गाउँपालिका, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका र धादिङको नेत्रावातीमा पनि तोकिएअनुसार बैंकका शाखा नपुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले दुर्गमका केही स्थानीय तहमा सुरक्षाको जोखिम र आवश्यक पूर्वाधार समेत उपलब्ध नभएकाले सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार हुन नसकेको बताएको छ ।
एसोसियसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले केही स्थानीय तहमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम देखिएको र आवश्यक पूर्वाधारको समेत अभाव भएकाले शाखा विस्तारमा ढिलाई भएको बताए । ‘कुनै स्थानीय तहमा सुरक्षाको पनि जोखिम छ,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘कुनै स्थानीय तहमा बैंक राख्ने जस्तो घर पनि नभेटिएका कारण विस्तारमा केही ढिलाई भएको देखिन्छ ।’
पूर्वाधारको कमी र सुरक्षाको जोखिम देखिएपनि बैंकहरूले शाखा विस्तारका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको शर्माको भनाइ छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले केही स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाई भएको र केहीमा पूर्वाधारको समेत अभाव भएपनि शाखा पुर्‍याउनेमा विश्वस्त रहको बताएको छ ।
पूर्वाधारको अभाव र सुरक्षा जोखिम हुँदाहुँदै पनि शाखा विस्तारका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी बैंकहरूले गराएका राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले दुर्गमका केही स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइ र पूर्वाधारको अभावले बैंकका शाखा स्थापना हुन नसकेपनि ७ सय ३० स्थानीय तहमा बैंक पुग्नु राम्रै उपलब्धि भएको बताए ।
शाखा विस्तारले कुल गार्हस्थ बचतमा योगदान
७ सय ३० वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ बचतमा मद्दत पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
अहिलेसम्म स्थानीय तहमा स्थापना भएका बैंकका शाखाहरूले मुलुकको कुल गार्हस्थ बचतमा २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा हुने बचतको २२ प्रतिशत बचत स्थानीय तहका शाखाहरूमा भएको बताए ।
‘जसरी अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३२ सय अर्ब रहेकोमा त्यसमध्ये हुने बचतमा २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा हुने भन्ने हो,’ उनले भने ।